DAILY NEWS Archives - News MM
Unicode အဆိုေ တျာ မူးလာ ကတော့ Myanmar Idol သီခြ ငျးဆိုပွိုငျ ပှဲကနေ တဆငျ့ လူသိမြားေ ကျြာကွား လာခဲ့ပွီး အောငျမွငျ တဲ့ဂီတ လမျးကွော ငျးပျေါကို ရောကျ ရှိလာခဲ့သူတ ဈယော ကျဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ မှာတော့ မူးလာက လှတျမွောကျ နယျမွကေိုေ ရာကျရှိနပွေီး စဈအာဏာရှငျလူ တဈစုကို …
Unicode ဘုနျးကွီးကြောငျးဆောငျ (၂)ဆောငျကို ကပျြသိနျးပေါငျး (၃၀၀၀)အကုနျကခြံပွီး ဆောကျလုပျလှူဒါနျး ပေးခဲ့တယျဆိုတဲ့ စမိုငျးလျရဲ့အကွောငျးလေးကို ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။ စမိုငျးလျကတော့တဈခတျေတဈခါက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး ပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားတိုငျးမှာအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျလကျြရှိနခေဲ့တဲ့ သူမကတော့ ကွညျနူးစရာကောငျးလှနျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖနျတီးတညျဆောကျထားနိုငျသူလေးဖွဈပွီးခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမတို့ မိသားစုလေးကတော့ အလှူအတနျးတှမှော လကျမနှေးဘဲ …
Zawgyi အမေစုရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းကို ပန်းကိုင်ပြီးကြိုချင်ပေမယ့် ယခုချိန်မှာတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ဘောလုံးသမား ဝင်းနိုင်စိုး တစ်ချိန်က ရတနာပုံအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပြီး…. .. ခြေစွမ်းကောင်းတွေကို ပြသထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမား ဝင်းနိုင်စိုးကတော့ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ တတ်တတ်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဝင်းနိုင်စိုးကတော့ မိသားစုနဲ့အတူ …… လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းနိုင်စိုးဟာ အမေစုရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းကို …
Zawgyi Mom Chao Norodom Jenna အမည်ရှိ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်ပြီး အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Mom Chao Norodom Jenna အတွက် တကယ်အစွမ်းအစရှိသူပါ ။ သူမဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ မော်ဒယ်အလုပ်တွေလုပ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ နာမည်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါအပြင် Norodom Jenna က ကမ္ဘောဒီးယား-ပြင်သစ် လူမျိုးဖြစ်ပြီး …
Zawgyi ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာ သာသနာတော်ကြီး မကွယ်မပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ မိုင်းလင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကို အားလုံးသိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးထဲမှ မိုင်းလင်းဆရာတော်ကြီးဟာ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ (၂၆)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းလောက်မှာ ကိုဗစ်ဝေသနာဖြင့် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရပါတယ်။ ‌ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုင်းလင်းဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလဟာ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာဘရာဇာခူး၊ မဟာမင်္ဂလ သဒ္ဓမ္မ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ …
ဘယျနရောပဲရောကျရောကျ အဆငျပွအေောငျ နထေိုငျတတျတဲ့ သူ့ရဲ့ပုံစံတဈခြို့အား ပရိသတျတှသေိအောငျ ဖှငျ့ဟပွောပွလာတဲ့ မဦေး
Unicode မိတျကပျဖနျတီးပညာရှငျ မဦေးကတော့ လကျရှိမှာလှတျမွောကျနယျမွတေဈနရောတှငျ ရောကျရှိနပွေီးတျောလှနျရေးတိုကျပှဲမြားအတှကျ ပွငျဆငျနတော ဖွဈပါတယျ။ တောထဲမှာ ခကျခဲမှုတှမြေားစှာနဲ့ နထေိုငျနရေပမေယျ့ လုံးဝညညျးညူခွငျးမရှိဘဲ ပွညျသူတှအေတှကျ စှနျ့လှတျအနဈနာခံနသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး မဦေးရဲ့ လူမှုကှနျယကျတှငျ ဘယျနရောပဲရောကျရောကျ အဆငျပွအေောငျ နထေိုငျတတျတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံတဈခြို့အား ပရိသတျတှသေိအောငျ ဖှငျ့ဟပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျ။ မဦေးကတော့ ဘဝမှာ ကွုံတှလေ့ာတဲ့ ခါးသီးမှုတှကေိုကိုယျနဲ့ တဈသားတညျးကအြောငျ နထေိုငျတတျဖို့ အမွဲသငျယူလရှေိ့ကွောငျး ရေးသားဝမြှေထားပါတယျ။ ဒီအသကျအရှယျအထိ ခကျခဲတဲ့ တံခါးခပျြတဈခြို့ကို ဖှငျ့ပွီး ခကျခဲကွမျးတမျးတာတှကေို ရငျဆိုငျခဲ့ရသလို အရသာရှိတာတှကေိုလညျး မွညျးစမျးခဲ့ဖူးပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အခုလကျရှိအခွအေနကေိုလညျး တဈခါမှ မကွုံတှဖေူ့းတဲ့ အတှအေ့ကွုံသဈတှကေို ခံစားဖို့အတှကျ ဖှငျ့ရခကျတဲ့ တံခါးခပျြတဈခုကို ထပျဖှငျ့လိုကျတယျလို့ သဘောထားကွောငျး ရေးသားထားပါတယျ။ အားလုံးကိုလညျး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ပြျောရှငျခွငျးတှနေဲ့ပဲ ပွနျဆုံခငျြတဲ့အတှကျ ဒီကာလမှာ ကနျြးမာအောငျနပွေီး အမှနျတရားကို လကျခံကာ အဓမ်မကိုဆနျ့ကငျြဖို့ ထပျမံတိုကျတှနျးလိုကျရကွောငျး ရေးသား ပွောပွထားပါတယျ။တိုငျးပွညျနဲ့လူမြိုးအပျေါ မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့မှနျကနျတဲ့ စတေနာတှနေဲ့ လုပျရကျတှကွေောငျ့ ပွညျသူတှအေားလုံးကမဦေးရဲ့ စိတျဓာတျလေးကို လေးစားဂုဏျယူနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံရေးအခွအေနမြေားကွောငျ့ မိသားစုဝငျမြားနဲ့ ခှဲခှာနရေသူမြားအားလုံး ခဈြရသူတှနေဲ့ အမွနျဆုံးပွနျလညျ ဆုံဆညျးနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး ဒီသတငျးလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။ Zawgyi မိတကြပဖြနတြီးပညာရှငြ မဦေးကတော့ လကရြှိမှာ လှတမြှောကနြယမြှတဈေနရောတှငြ ရောကရြှိနပှေီးတောလြှနရြေးတိုကပြှဲမွားအတှကြ ပှငဆြငနြတော ဖှဈပါတယြ။ …
ကန်စွန်းဥနီစိုက်တဲ့သူဆိုပေမဲ့လည်း ရုပ်ချောလွန်းလို့ မိန်းကလေးတွေကြား အတော်လေးရေပန်းစားနေခဲ့တဲ့ကောင်လေး…..
Zawgyi ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Edwina T.Bandong အမည်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးဟာ Sagada မြို့သို့ သွားနေခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်တောင်တန်းတွေကို ဖြတ်ကျော်နေရင်း လမ်းမကြီးဘေး ၊ ကန်စွန်းဥနီးစိုက်ခင်းမှ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကောင်လေးဟာ ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းလို့ ခြံသွားတဲ့ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့လည်း ထင်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ် ။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကောင်လေးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး သူမရဲ့ Facebook Account မှာ …
အလောင်းတွေကို စောင်လေးတွေပတ်ပြီး သင်္ဂြိုလ်နေကြတာ မကြည့်ရက်တော့လို့ အလောင်းတင် စင်လေးရိုက်ပြီး လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ သံဃာတော်များ…..
Zawgyi လတ်တလောမှာ ပြည်သူတွေကတော့ အာဏာရှင် ဖိနှိပ်မှုဒဏ်တွေကို ခံစားနေရတဲ့ ကြားကနေ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကိုလည်း ဒုက္ခမျိုးစုံဖြင့် အလူးအလဲခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေရဲ့ မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်းမှုတွေကြောင့် လက်ရှိမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ နဲ့ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် မတည်လှူဒါန်းပေးမယ့် အလှူရှင်တွေဟာ အရင်လိုမရှိတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေ အခက်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလို ပြည်သူတွေ ဒုက္ခကြုံတွေ့ နေရတာတွေကို …
လူအများအားကျရလောက်အောင် ပန်းပေါင်းစုံတို့၏အလယ်မှာ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ferrariကားသစ်ကြီးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် အလှပဂေးလေး…….
Zawgyi ခမ်းနားထည်ဝါလှသော ပန်းပေါင်းစုံတို့၏အလယ်တွင် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာဖြင့် အခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်ရန်အတွက် မလွယ်ကူလှပေ။ လူတိုင်းတို့သည် မိမိတို့၏ချစ်ခင်နှစ်သက်ရသောသူကို ဘဝအမှတ်တရများကျန်ရှိစေရန် ဖန်တီးပေးလိုကြပေသည်။ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်သူကောင်မလေးတစ်ယောက်သည်…… အမေရိကန်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်တွင်သာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုဗီယက်နမ်ကောင်မလေး၏ ခင်ပွန်းဟာ Morri international group၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ သူတို့၏ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် အိမ်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပန်းပေါင်းစုံတို့ဖြင့် အလှဆင်ထားပြီး farrariကားသစ်ကြီးကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းဟာ …
အသက် ၁၀ နှစ်ပဲရှိသေးပေမဲ့ အနာဂတ်မှာ စူပါမော်ဒယ်လ်ဖြစ်လာတော့မယ့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် မော်ဒယ်လ်မလေး……
Zawgyi ကိုရီးယားနိုင်ငံက ချစ်စရာကောင်းပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ Kim Gyu Ri အမည်ရှိ ကလေးမော်ဒယ်လ်မလေးဟာ ၁၀ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပေမဲ့……. သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ပျံ့နှံ့မှုများပြားလာတဲ့အချိန်မှာ ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကပင် မော်ဒယ်လ်တ‌စ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ Kim Gyu Ri လို ကလေးမော်ဒယ်လ်က သူမရဲ့ရုပ်ရည်ဟာ အားသာနေတာကြောင့် သူမမှာ ချွင်းချက်မရှိပါဘူး။ သူမရဲ့မိခင်ကလည်း ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးလို …